Qarax ay mas'uuliyiin ku dhaawacmeen oo ka dhacay Gobolka Baay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Qarax ay mas’uuliyiin ku dhaawacmeen oo ka dhacay Gobolka Baay
Qarax ay mas’uuliyiin ku dhaawacmeen oo ka dhacay Gobolka Baay
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa waxaa lala eegtay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada Buurhakaba ee Gobolka Baay, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Saraakiil dhinaca Ammaanka ah ayaa Risaala u sheegay in Gaari ay saarnaayeen mas’uuliyiintaan lala beegsaday qaraxa, waxaana ku dhaawacmay Taliyaha NISA ee degmada Buurhakaba oo lagu Magacaabo Xuseen Dhuubow iyo guddoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Buurhakabo Nuurow Ibraahim & askar.
Ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur Galbeed ayaa tegay halka qaraxa uu ka dhacay, iyaga oo goobta ka qaaday dhaawaca mas’uuliyiintaan oo la sheegay in uu yahay mid fudud.
laamaha Amniga degmada Buurhakaba ee Gobolka Baay weli si faah faahsan ugama hadlin qaraxa ay ku dhaawacmeen mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada.
Previous articleBeesha Caalamka oo cadaadis saareysa Farmaajo iyo Rooble
Next articleMaleeshiyaadkii ku dagaalamay Xananbuure oo Maanta la kala qaadayo